Manchester United oo Guul Soo laabasho ah ka gaartay Newcastle xili inta Badan Hogaanka Cayaarta laga hayay+SAWIRRO – Gool FM
Manchester United oo Guul Soo laabasho ah ka gaartay Newcastle xili inta Badan Hogaanka Cayaarta laga hayay+SAWIRRO
CR Shariif October 6, 2018
( Premier League ) 06 Okt 2018. Manchester United ayaa xili dambe guul muhiima ka gaartay dhigeeda Newcastle markii ay uga badiyeen 3-2
Cayaarta ayaa qeybta hore lagu kala maray 2-0 oo hogaanka ay ku heystay naadiga Newcastle.
Kooxda martida ayaa xili hore ka naxsatay United markii laba gool oo deg deg ah ay la yimeedeen seddax gudaheed.
goolka daah furka ayaa waxaa u dhaliyay laacibka Kenedy kaddib ku fooro tuur aheyd oo uu qaban waayay xiddiga Matic isagoona si qurux badan goolka ugu dhameystiray.
laba daqiiqo kaddib Newcastle ayaa goolka labaad durbadiida dhalisay waxaana kubbad uu qaab xirfadeysan u meermeeriyay daafaca united uu ugu dambeyn darbad xoogan shabaqa ku hubsaday laacibka Yoshinori Muto.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaaha dambe Red Devils ayaa wax badan ka badashay cayaarteed iaygoo mar kastaa weerar ku ahaa goolka Newcastle.
Dheesha oo socota daqiiqadii 70-aad Juan Mata ayaa goolka usoo celiyay united markii uu si wanaagsan kubbad ugu dhameystiray goolka.
Intaa kaddib markale kooxda United ayaa laba badbaadiyay laba fursadood oo halis ahaa markii xiddiga Smalling iyo Rashford ay darbad xoogan ku tuureen goolka kooxda Martida.
Balse daqiiqadii 76-aad jawiga garoonka Old Trafford ayaa is badal markii kubbad ay si wanaagsan uga dheeleen laacibiinta kala ah Poga iyo Martial uu kugu dambeyn goolka bareejada u keenay United markii shuud xoogan uu goolka dhexdhigay martial.
Ugu Dambeyn United ayaa goolka guusha la timid daqiiqadii 90-aad kaddib laacibka badalka kusoo galay ee Alexis Sanchez oo gool madax ku dhameystiray kubbad diiba oo lasoo dhigay.
Guushan ay gaartay Red devils ayaa badbaado u ah macalin kooxda Jose Mourinho uu Shaki ku jiray Mustaqbalkiisa leylin ee naadiga waana guushii ugu Horreysay uu gaaray kaddib afar dheel dhammaan tartamada.
Halyayga reer Germany ee Rudi Voller oo ku dooday in Messi uu ka sareeyo qof walba
Real Madrid oo Guuldarro Naxdil leh kala kulantay Deportivo Alaves